ps4kirppis.juttelu.com • katso viestiketjua - Bonus deposit
Kirjoittaja Yortvandy8899 » 09 Loka 2019, 09:24
Ny Casinos an-tserasera dia manome bonus deposit mba hisarihana ireo mpanjifa vaovao ary avelao izy ireo hizaha toetra ny lalao amin'ny casino alohan'ny hametrahany an'arivony. Betsaka ny casinos manolotra bonus isan-karazany. Ny ankamaroan'izy ireo dia lalao 100%. Ka raha mametraka $ 100 ianao dia hahazo vola $ 100 fanampiny.
Ity vola bonus ity dia miankina amin'ny fitsipika hafa noho ny vola tena nametrahanao vola. Ka raha noheverinao fa afaka mametraka vola $ 100 ianao ary milalao amin'ny $ 100 an'ny casino, ka tsy mampidi-doza ny vola miditra amin'ny tranga rehetra izany. Misy fetrany voafetra amin'ity vola ity hisorohana ny mpangalatra bonus tsy hanararaotra an'io vola io.
Rehefa mametraka vola $ 100 ao amin'ny kaonty an-tserasera ianao dia hanana $ 100 fanampiny fanampiny avy ao amin'ny casino. Io vola bonus io dia azo kitihina rehefa avy "very" $ 100 ianao. Avy eo hanondrana ao amin'ny $ 100 omen'ny casino an-tserasera ianao. Ka aleo lazaina hoe very ianao, $ 150. $ 100 no very avy aminao, ary $ 50 avy amin'ny vola nomen'ny casino. Ianao dia manana vola $ 50 dolara sisa tavela.
Azonao atao ny manohy mampiasa io vola io mba hiadiana mandra-piverinao ny renivohitra voalohany.
Liittynyt: 03 Loka 2019, 06:47